नेपाली फिल्मलाई प्रयोग गर्ने कि पूजा गर्ने ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsनेपाली फिल्मलाई प्रयोग गर्ने कि पूजा गर्ने ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – नेपाली फिल्मको विकास किन नभएको होला ? के यो क्षेत्रमा काम गर्ने कलाकारहरुले यसलाई गम्भिर रुपमा लिएका होलान् ।
गम्भिर रुपमा लिने कलाकारको प्रगती देख्न सकिन्छ । तर, गम्भिर रुपमा नहेर्ने कलाकारको गती के भएको होला ? नेपाली फिल्मलाई प्रयोग गर्ने कि पूजा गर्ने ? आजको मुख्य बहसको बिषय यही नै हो ।
अभिनेत्री प्रियंका कार्की अमेरिकाको ग्रिन कार्ड त्यागेर नेपाल आएकी हुन् । नेपाल आएर पहिलो फिल्म असफल हुँदा पनि उनी हिट भइन् । उनी चलिन् यसकारणले कि उनले फिल्मलाई पूजा ठानिन् । आफूले काम गरेको क्षेत्रलाई पूजा ठानेर त्यसमा लागे सफल भइन्छ नै । अभिनेता भूवन केसी छोरा अनमोल केसीले चाहेको खण्डमा अमेरिका जान सक्ने बताउँछन् । तर, अनमोलले नेपाली फिल्मलाई पूजा गर्ने भन्दै भूवनले उनी अमेरिका नजाने बताए ।
अभिनेता राजेश हमालले पनि सिनेमालाई पूजा ठानेका थिए । उनी अमेरिका धेरै पटक गए तर बस्ने गरि गएनन् । हुनत, विदेश जानु वा नजानुले सिनेमालाई पूजा गरेको वा प्रयोग गरेको भन्न मिल्दैन । तर, यो क्षेत्रलाई व्यक्तिगत फाइदाका लागि सिमित रुपमा प्रयोग गर्नेहरुको संख्या भने बढेको छ ।
अभिनेत्री नन्दिता केसी अमेरिका पुगिन् । कार्यक्रमको सिलसिलामा उनी अमेरिका पुगिन् र उतै बसिन् । उनले करिब एक दशक सिनेमा क्षेत्रमा बिताइन् । असफल हुँदै गएपछि उनी अमेरिका हानिएकी हुन् । उनी अमेरिका हानिनुमा उनको अभिनेत्री भन्ने बायोडाटाले नै उनलाई महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो ।
अहिले अमेरिका जानका लागि ग्रिन कार्ड नेपालबाटै बनाउने प्रचलन बढेको छ । यो कार्ड बनाउनका लागि सिनेमा क्षेत्रका सर्टिफिकेट बोकेर दैनिक सयौ कलाकर्मी धाइरहेका छन् । अहिले धेरैको ध्येय सिनेमामा काम गर्नु भनेकै अमेरिका जाने बाटो खुलाउने हो जस्तै भएको छ । यो भने सिनेमाको प्रयोग हो ।
नेपाली फिल्ममा गम्भिर भएर लाग्ने कम छन् । गम्भिर भएर लाग्ने भन्दा यहाँ राजनीति गर्ने र छोटो समयमा विदेश उड्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ । सिनेमा व्यवसायिक हुनका लागि यसलाई प्रयोग कम पूजा धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अभिनेता जीवन लुइटेल पनि सिनेमामा काम गर्दा गर्दै अष्ट्रेलिया हुँदै अमेरिका गएका हुन् । अहिले त उनी नेपाली फिल्मबाट हराएका पनि छन् । नम्बर १ को ट्याग भिर्दा भिर्दै जीवनले विदेशलाई पानी पधेरो बनाए र उतै हराए । नेपाली फिल्ममा यस्ता उदाहरण धेरै पाइन्छ ।
काम पाउँदासम्म मनलाग्दी काम गरिदिने, निर्मातासँग मनलाग्दी पारिश्रमिक मागिदिने र विस्तारै कमजोर बनेपछि सोही कामको विवरण देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने कलाकार धेरै छन् ।
सिनेमालाई कलाकारदेखि अन्य फिल्मीकर्मीले यही रुपमा लिदा नै यो क्षेत्र व्यवसायिक बनेको छैन । सिनेमाको पूजा गर्छु भनेर यो क्षेत्रमा भित्रिदा राम्रो हुन्छ । सिनेमामा लागेर आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा लिन्छु भनेर आउँदा यसले कसैको पनि भलो गर्दैन ।
nepali movie gossip
घमण्ड नगरेपनि हुन्छ, फिल्म लाइनमा आज पाएको काम भोली नपाएर भौतारिन पनि पर्छ । एउटा फिल्म चल्दा स्टार ठान्नेहरु काम नपाएर भौतारिएका छन् । स्टारडम र व्यस्तता दुई दिनको पाहुना हुन्, आज छ भोली छैन […]